पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोना संक्रमित थपिने र घर फर्कने संख्या कति ? - Candles Khabar
गृहपृष्ठ पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोना संक्रमित थपिने र घर फर्कने संख्या कति ?
देशभर पछिल्लो २४ घन्टामा ३ सय ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ५ हजार ३० जनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणको नतिजामा २ सय १४ पुरुष र १ सय २२ महिला गरी ३ सय ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयकाअनुसार थपिएका ३ सय ३६ जनासहित कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६८ हजार ६ सय ४६ पुगेको छ । यीमध्ये ३ हजार ७ सय ९९ जना सक्रिय संक्रमित अवस्थामा रहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १ सय ९८ जना संक्रमित थपिएका छन् । यीमध्ये काठमाडौंमा १ सय ४६, ललितपुरमा ३६ र भक्तपुरमा १६ जना रहेका छन् ।
पछिल्लो २४ घन्टामा २ सय २६ जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन् । योसँगै २ लाख ६२ हजार ८ सय ६८ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । निको हुने दर ९७।९ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, कोरोना संक्रमणबाट थप ४ जनाको मृत्यु भएको छ । थपिएका ४ जनासँगै देशभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ९ सय ७९ जना पुगेको छ ।
अहिलेसम्म देशभर २० लाख ५१ हजार ७ सय ५६ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ ।
पछिल्लाे - संसद विघटन : संवैधानिक इजलासले मागे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना
अघिल्लाे - आज शुक्रवार, पञ्चाङ्गसहित हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ माघ ९ गते